Ukuhanjiswa kwe4th. Ubuso babacuphi uGunnar Staalesen kunye noDeon Meyer | Uncwadi lwangoku
Ababhali uDeon Meyer kunye noGunnar Staalesen.
Masiye kwi isavenge sesine into eyahlukileyo kwi ngaphambili. Ngeli xesha sinalo ababhali ababini abohluke kakhulu, uGunnar Staalesen noDeon Meyer. Basenokungaziwa kuluntu ngokubanzi, kodwa bayaziwa ababhali benoveli abaziwayo kumazwe abo, INorway noMzantsi Afrika. Bobabini benze oonobumba ababini, abacuphi bakhe abadumileyo, ethi xa izisiwe kwiscreen esincinci, ibinayo ubuso obunye. Eyona nto imbi kakhulu, kukuba umsebenzi wakhe ufike ngokulambisa apha.
Sijonga Staalesen, Umphathi wenoveli yolwaphulo-mthetho eNorway, umyili wabecuphi wabucala Umdumba weVarg. Sele Meyer, umyili wegosa lokuqala lamapolisa kwaye kamva waba ngumcuphi wabucala, Mat joubert. Wababoleka bobabini ubuso bakhe kunye nomzimba wakhe Umdlali waseNorway UTrond Espen Seim, Zilungele zombini, ngaphandle kokwahluka ngokwenkcubeko kunye nemeko yabalinganiswa.
1 Ngompu staalesen
2 UDeon Meyer
2.0.1 Umdlali weqonga. UTrond Espen Seim
Wazalelwa ngaphakathi bergen ngo-1947. Wafunda ifilografi kunye noncwadi lwesiFrentshi nolwesiNgesi kwiYunivesithi yaseBergen. Wapapasha inoveli yakhe yokuqala ngo-1969 kwaye ufumene amabhaso ahlukeneyo oncwadi.
Uyaziwa ngothotho oluyimpumelelo lwe Iinoveli ezingama-21 eneenkwenkwezi Umdumba weVarg, Owayengunontlalontle kuKhuseleko loMntwana wajika waba ngumcuphi Kula mabali Ezili-12 zazo ziye zahlengahlengiswa kwimiboniso bhanyabhanya, ngempumelelo efanayo neencwadi. Apha, ngelishwa, kuphela Izangqa zokufa, nayo ekunzima ukuyifumana. Kodwa babonwa lIifilimu zokuqala ezi-6 kwiminyaka embalwa edlulileyo kwiLa 2.
Izangqa zokufa (IDodens drabanter). UVarg Veum ufumana umnxeba ombhekisa kwimeko awayesebenza kuyo xa wayekwiNkonzo yoKhuseleko loMntwana. Umntwana bekuyiminyaka emibini Ukwahlukana nomama wakhe kwiimeko ezibuhlungu. Kungekudala emva koko, umntwana ofanayo, UJan Egil, wabona ukusweleka kukayise owamkhulisayo kwaye wahanjiswa nosapho olutsha. Kwiminyaka elishumi kamva, uJan Egil oselula unjalo utyholwa ngokubulala kabini ukuba iVarg Veum kuyakufuneka iphande.
La Uthotho lweemovie Ingaba yi. Kulungiselelwe abo bafuna ukubajonga.
Iintyatyambo ezikrakra (IBitre blomster) (2007)
Idurmiente entle (Wajika(2007)
Kude kube sekufeni (Hlala phantsi(2008)
Iingelosi eziwileyo (I-Falne engler(2008)
Umzimba kwifriji (Kvinnen kunye kjøleskapet(2008)
Izinja ezingcwatyiweyo azilumi (begravde hunder(2008)
Skriften på veggen (Umyalezo oseludongeni(2010)
Svarte kude (Iigusha ezimnyama(2011)
IDodens drabanter (Ukusweleka kwesathelayithi(2011)
Mna mørket er alle ulver grå (Ebusuku zonke iingcuka zingwevu(2011)
De døde har det godt (Abafileyo balungile(2012)
Kalde hjerter (Iintliziyo ezibandayo(2012)
Meyer wazalwa ngo-1958, ePaarl. Usebenze njengentatheli, umbhali kunye nomlawuli wokuyila kwiinkampani zentengiso. Ngethamsanqa apha imisebenzi engaphezulu ifikile eyakho, ukongeza kuloo nto Izithunzi zangaphambili (1999), ekunzima nokufumana.
Iiyure ezilishumi elinesithathu (2014) kunye Incopho kaMtyholi (2010) inkwenkwezi omnye umphenyi, UBennie griessel. Kwaye kunjalo Uhambo olunegazi (2012) kunye Intliziyo yomzingeli (2009).
Izithunzi zangaphambili. Umphathi Mat joubert Ulahlekelwe yinto yonke: umfazi wakhe, wabulawa ngokumasikizi, ithemba kunye nekamva Ukungenzi kunye nokungakhathali, utywala kunye nokuzisizela kukhawulezisa ukuwa kwakhe. Kodwa umntu ongamaziyo uthotho lokubulala iyothusa iKapa, ​​ukusombulula eli tyala kuya kuba lithuba lokwenza njalo inkululeko yam.
Le noveli yahlengahlengiswa kwaye yenziwa inkulumbuso kunyaka ophelileyo ngesihloko esithi Kapa njengeziqendu ezi-6 zenkonzo. Yayenzelwe umabonwakude (itshaneli Calle 13) kwi Imveliso yaseJamani neyaseMzantsi Afrika. Wabala kwi Ukuvunywa kombhali kokubini kulungelelwaniso lwayo kunye nokukhethwa kwabadlali.
Kukho isihloko esilandelayo noJoubert njengomntu ophambili, Abakhweli, apho ashiye khona amapolisa kwaye ungumcuphi wabucala. Kodwa ukwazi ukuba izakufika apha. Kuyafana noluhlu.
Umdlali weqonga. UTrond Espen Seim
Uzalelwe e-Oslo ngo-1971, u Umdlali odumileyo waseNorway kunye nomlawuli weqonga, ifilimu kunye nomabonakude. Impumelelo eyona mpumelelo yakhe inkulu kunye nehlabathi nge Umdumba weVarg. Ngenxa yomzimba wakhe oqhelekileyo weViking, nawuphi na umlinganiswa ovela kula malungu okuhombisa, kodwa ukuzonwabisa kwakhe koMzantsi Afrika onzima kunye noqhwithela nako kwaba yimpumelelo. Mat joubert.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Intlawulo yesi-4. Ubuso babacuphi nguGunnar Staalesen kunye noDeon Meyer